Iwo Akanakisa Imbwa Diapers kune Yese Situation | Imbwa Nyika
Iyo yakanakisa imbwa manapukeni kune ese mamiriro
Imbwa manapukeni chigadzirwa chakanyanya kurapa zvinhu zvakaita sekusagadzikana kana kuchembera, asiwo kubatsira kudzidzisa vana kuti vamirire kuenda kuchimbuzi uye kuti vasabuda mumba, kanda makava.
Munyaya ino Tichaona marudzi akasiyana-siyana emapupa embwa, pamwe nekushandiswa kwawo uye mamwe mazano pakusarudza nekuishandisa. Aya manapukeni akagadzirwa ane hunhu hwakafanana hwe kudzivirira, kunhuhwirira uye kunyaradza izvo iwe unotoziva kare, asi izvo zvinokodzera chimiro chembwa yako.
Ivo anokwanisa kuraswa uye anouya nehukuru pasina kukanganisa kufambaPamusoro peizvi, vanosiya nzvimbo yemahara yemuswe nemakumbo maviri ekumashure, saka ivo vakanaka kudzivirira imbwa dziri mubishi rekuwana maitiro kubva mukudzikira kwemakona emidziyo kana madziro eimba yako.
TRIXIE 12 manapukeni e...
Amazon Basics - Mucheka ...
Kunze! Imbwa Manapukeni ...
TRIXIE Manapukeni e ...
KUNWWA & KUNYENELERA Diapers ...
1 The best diaper for imbwa
1.1 Pack ye 3 reusable diapers
1.2 Reusable Male Dog Diapers
1.3 Manapukeni ekushandisa kamwe chete evarume
1.5 Napukeni rinowachwa remunhukadzi
1.6 Super absorbent diaper yevakadzi
1.7 Underpads yembwa
2 Manapukeni embwa anoshandirei?
2.1 Zvembwa dzakura
2.3 Kudzidzisa mambwanana
2.4 Madzimai mukupisa
3 Mhando dzembwa manapukeni
3.1 Kune imbwa dzine kusagadzikana
3.2 Kotoni hutsanana mafupi
3.3 Manapukeni eEcological
4 Mazano pakupfeka diaper
5 Kupi kunotenga imbwa manapukeni
The best diaper for imbwa
Pack ye 3 reusable diapers
PET MAGASIN Manapukeni ...
Paki iyi ne matatu reusable imbwa manapukeni ane zvese zvaunoda kudzivirira tsaona uye zvinotyisa pane upholstery, rugs uye sofa.. Iwo akagadzirwa nemucheka wakanyanyisa kunwa uye ane elastic band muchiuno kuti atsigire zviri nani. Idzo dzinonyanya kunanga kubhiti mukupisa (kureva, nekuenda kumwedzi) uye yehukuru diki, kunyangwe paine akati wandei saizi uye mamodheru aripo, kubva kune akakomba kusvika kune anonyanya kushamisa (ayo ane mifananidzo yakanaka kwazvo).
Mune zvirevo zvinoratidzwa kuti, kunyangwe chiri chigadzirwa chakanakisa, kungotora kurasikirwa, kwete kuwanda kwepee.
PET MAGASIN Manapukeni e ...
Aya manapukeni haana kugadzirirwa madzimai, sezvo akabatanidzwa semhando yebhanhire rinovhara zvikamu zvadzo zvinoputika. Zviripachena, hazvina kugadzirwa kuti zviputike (imbwa hadziwanzoenda mudumbu mune diaper kunze kwekunge dzine fecal incontinence), kungo pee. Ivo vakanyatsogadzikana, sezvo iwe unogona kuzvigadzirisa zvachose nevelcro, uye vane zvidimbu zviviri zvejira kuchengetedza pee. Mukuwedzera, ivo varipo muhukuru hwakasiyana uye mavara.
Manapukeni ekushandisa kamwe chete evarume
Amazon Basics inogara iine zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamutengo wakakura, senge iyi paki yemakumi matatu anoraswa manapukeni embwa dzechirume. Dzinogona kugadziridzwa kune imwe nhanho kune chipfuyo chako, kunyangwe iwe uchifanira kuve nechokwadi chehukuru hwakakodzera nekutarisa tafura ine zviyero zvakakurudzirwa uye saizi. Chinhu chakanaka pamusoro pechigadzirwa ichi ndechekuti chinoshandura ruvara kana imbwa yaita peed, saka iwe unozoziva nekukurumidza kana yave nguva yekuchichinja.
Trixie, rudzi rweGerman rinonyanya hunyanzvi hwemhuka dzinovaraidza, inoisa kwauri paki iyi inonakidza yemanapukeni ekushandisa kamwe chete evarume. Ivo vanogadzirwa nerubatsiro rwechiremba wemhuka, uyezve, vane elastic bhendi kuti vagadzirise ivo zvakanyanya sezvinobvira kuchiuno chembwa yako., kuwedzera pakuva nemasaizi akati wandei aripo. Mukuwedzera, inoshandiswa kune yakawandisa pee.
Napukeni rinowachwa remunhukadzi
KUPEDZA KUNE HANYA ...
Mumwe muenzaniso wemanapukeni embwa, mune iyi nyaya vakadzi, vanotambura nekusagadzikana kana vane nguva yavo yekutevera. Iri paki rinouya nemanapukeni matatu anosanganisirwa aunogona kugeza nemaoko kana muchina. Dzinokwana chaizvo, sezvo dzine elastic band uye velcro kumativi ose maviri, pamwe negomba rokutora muswe uye kuita kuti ive yakasununguka sezvinobvira. Pakupedzisira, chigadzirwa ichi chinowanikwa mumhando dzakasiyana-siyana uye mavara.
Super absorbent diaper yevakadzi
Kune avo vane imbwa ine incontinence matambudziko, uyeAya Trixie Brand Disposable Diapers Akanaka. Kunyange zvazvo mamwe mashoko achitaura kuti saizi yakati tarisei, ese anoratidza simba rayo guru rekusveta, sezvo ichichengeta mhuka yakaoma uye, hongu, haipindi. Vane gomba iro muswe unopfuura uye kuti ivo vanonyanya kugadzikana: kuve nechokwadi kuti pee haitize ipapo uye kuigadzirisa zviri nani, namira migumo miviri yegomba iyo yasara nekashoma tepi yekunamira (kuchenjerera kubata bvudzi).
Arquivet Yehupfumi Pack ...
Pakupedzisira, chigadzirwa chisiri chifukidziro pachacho, asi chimwe chinhu chakafanana: soaker. Zvakafanana nenapukeni rinoraswa raunoisa pasi kuti imbwa yako igone kuzvisunungura pamusoro uye usasiya zvose zvakarasika. Izvi hazvisi kungotora zvakanaka chete, asi ine hukuru hwakanaka uye mana anonamatira kuti akwanise kuigadzirisa pasi uye kudzivirira kuti irege kufamba, nokudaro kudzivisa zvimwe zvinotyisa. Sezvatakataura, ndezvekushandisa kamwe chete uye mupakiti imwe neimwe mune makumi matatu.
Manapukeni embwa anoshandirei?
Isu tinofungidzira kuti isu hatifanire kukuudza kuti chii chiri kushandiswa kwembwa manapukeni, kunyangwe zvichigona kubatsira kune vekutanga imbwa shamwari kuziva zvikonzero nei zvichigona kubatsira kuishandisa. Muzviitiko zvese, zvisinei, Zvinokurudzirwa kuti kana ukaona kuti imbwa yako iri kubuda, uende nayo kun’anga kare kuti uone kuti yawana kurapwa kwakanaka..
Manapukeni chakagadzirwa nezvinhu zvinopesana nemitoro uye hwema. Ivo vanokwana muviri wechipfuwo chako sezvavanouya muhukuru S, L uye XL.
Mwanakomana Ultra absorbent uye pane ese echirume neechikadzi, chikamu che izvo zvakakosha pakupisa kwevakadzi.
Manapukeni aya ane chimiro chinogadziriswa pachiuno netepi yekunamira kudzivirira kudonha. Pakati payo panopinza zvachose uye chine mativi anobvumidza mhuka kufema isina kuikanganisa.
Ivhareji ye Kureba kwembwa jamba maawa matanhatu kusvika masere zvichienderana nehukuru uye huremu. Kune mhando dzinoraswa uye dzinoshandiswazve, yekupedzisira inouya yakashambidzika kana machira machira ane yepakati padhi yekubata mitoro.
Kekutanga iwe paunoyedza kuisa imbwa yako mumachira zvakakosha kuti uipe kunhuwa, nekuti izvi zvinoenderana nekuti inowana chivimbo here kana kuramba kushandisa.
Ichi chikonzero zvinokurudzirwa kuita uyu wekutanga manapukeni a chiitiko chinofadza. Shevedza chipfuwo chako utange kutamba naye zvakaringana, zvishoma nezvishoma mubvumidze kunhuwa zvinhu uye kutanga kuzviisa pamakumbo ake ekumashure, wobva wagadzirisa zvine mutsindo mabhandi acho kumativi pasina kumukuvadza.
Pakutanga iwe unofamba nekungwarira nekuda kwekunzwa kwezvinhu zvekunze pane muviri wako, asi zvishoma nezvishoma anozojaira.
Kana munhu akura, zvirwere zvinooneka, chimwe chinhu chinozivikanwa muzvose zviri zviviri vanhu nemhuka. Imbwa dzinenge dzatove zera dzingatadza kubuda weti, kungave nekuti zvakavaomera kuti vabude panze kuti vazvisunungure., nokuti havagoni kudzorawo kana kuti zvimwe zvikonzero zvine chokuita nezera.
Urinary kusagadzikana haingoonekwi mumbwa dzakura chete, inogona zvakare kuve chiratidzo chezvirwere zvinogona kukanganisa marudzi ese embwa.Semuyenzaniso, weti turakiti chirwere, chirwere cheshuga ... Sezvatakataura, usangoisa manapukeni pambwa, enda naye kuna vet kuti asarudze kuti incontinence inokonzerwa nei uye kuti ndeipi yakanakisa kurapwa.
Kungofanana nemanapukeni anodiwa kana imbwa dzakura, dzinobatsirawo pakutanga kwehupenyu. Unogona kuzvishandisa panguva yekudzidziswa, kudzivirira chipfuyo chako kuti chirege kubuda pee nekuchikanganisa, kusvika yadzidza kubatirira.
Zvichipa mutsauko weatomical pakati pembwa neembwa hadzi manapukeni anatomically inogadziriswa kune ese ari maviri, Kana iri imbwa, mabhanhire anonamira uye ari kumucheto anogona kuwedzerwa kana kuderedzwa zvinoenderana nehupamhi hwekutenderera kwechiuno chembwa yako, nepo mune zvevakadzi zvinonyanya kushanda uye kugadzikana.
Kune imbwa dzechirume dzakakodzera pavanotanga kuzvinunura vari kumba; Iko kushandiswa kwejasi kunodzivirira kuteuka uye kunovimbisa kuti vanochinjika zviri nyore kuti vadzorwe kusvika nguva yekufamba.
Manapukeni anodzivirirawo vakadzi vari mukupisa kuti vasasiya mavara mumba, saka ivo chinhu chakajairika kune avo vane imbwa dzisina kuchekwa, sezvo ndipo panouya mutemo wehure.
Zvingave zveChihuahua, Labrador kana imbwa yeMalta, iyo imbwa jasi yakakosha kune hupenyu hune hutano. Saka kana iwe uri muridzi wembwa uye iwe usingazive kuti manapukeni anodhura zvakadii kana maitiro ekuaisa, nzira yakanakisa yekuziva ndeye kufunga mhando, kukura uye kukura kwechipfuwo chako.
Kukura kwembwa yako yakakosha kuti uwane modhi yeiyo akakodzera manapukeni anokwana iye. Kuti uite izvi, chiyera chiuno chemhuka yako uye wobva wareva kune iwo mirairo yeyakakodzera jira.
Kana iwe uchitsvaga iyo hombe imbwa manapukeni, unogona kukurumidza kusarudza L saizi imbwa chinjera.
Iyo morphology yeiyo imbwa yakasiyana maererano nebonde rayo, saka zvakafanira kuti utarise bonde rembwa yako (murume kana mukadzi) sarudza iyo mutambo unokodzera zvakanyanya. Zvitoro zvezvipfuyo zvinopa akasiyana siyana manapukeni embwa.
Mhando dzembwa manapukeni
Mumusika kune marudzi maviri makuru emanapukeni embwa, zvingava zviri nani kana kuti zvakaipa maererano nezvatinoda.
ari manapukeni anoraswa dzinowanzova dzakachipa zvakati, asi sezvo dzichishandiswa kamwe chete, dzinokuvadza zvakatipoteredza. Kune rumwe rutivi, kana imbwa yako ine dambudziko raanofanira kupfekedza diaper kwenguva pfupi, inogona kuva sarudzo yekufunga.
ari manapukeni anowachwa Iwo akagadzirwa nemucheka uye ndiwo iwo, anogezeka. Kunyangwe zviri bhomba kuziva kuawacha uye anodhura zvakanyanya pane ega-kushandisa, chokwadi ndechekuti iwo ari nani kune zvakatipoteredza uye nekufamba kwenguva anopedzisira adhura, nekuti anogona kushandiswa kakawanda. Iwo akanakira imbwa dzinoda machira enguva refu.
Kune imbwa dzine kusagadzikana
Kana iwe uchitsvaga manapukeni anodzivirira chipfuwo chako kubva mukusagadzikana kwavanogona kutambura, tinokurudzira kuti iwe utsvage izvo trouser mhando izvo zvakanaka, zvinoshanda uye zvakapfava.
Iyi modhi ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nembwa dikisezvo ivo vanokwana mushe uye vanodzivirira kuteuka pamakumbo avo matete. Rangarira kuti kana imbwa yako isisina weti, ichatanga kuita weti kwese isingade kudaro, saka inofanira kupfeka jira iri.
Iyi modhi ine kunyanya kwe kugadzirwa nemucheka wakapfava chaizvo kupa rakanakira nyaradzo kune chipfuwo chako. Pamusoro pekupfava kwayo, iwe zvakare uchashamisika nerutsigiro rwayo rwakanaka nekuda kwekubata kwemhando uye kuita. Saka kana ichi chiri icho modhi chawanga uchitsvaga, unogona kuzvitenga pano.
Kotoni hutsanana mafupi
Kune imbwa isingakundike kana mbichana mukupisa, hapana chiri nani kupfuura aya mabhurugwa ehutsanana. Muchokwadi, kushandiswa kwehutsanana kwemapantini aya kunogona kuchengetedza imba yako; angave ari sofa rako, pasi kana pamakusheni.
Iyo yehutsanana uye yakasununguka modhi, kuwedzera pakuve wakanaka kune chipfuwo chako.
Inofadza kupfeka, imbwa yako inozoitora nekukasika nekuda kwayo kupfava kwayo. Mukana mukuru wemapanty aya ndewavo Kuvharwa kweVelcro iyo inopa chengetedzo iri nani.
Izvo zvakakosha kuti kubva panguva yekutanga iwe kufurira imbwa yako kuti isatya kana kusaramba kushandiswa kwayo, kusvika padanho rekuzviita iwe, izvo zvichave nyore kuchinjika uye nekudaro unzwe kunzwa kukuru kwekunyaradzwa kana uchiishandisa.
Hukuru ndihwo gadzirisa zvinoenderana nekuyerwa kwedumbu remudumbu rako, inogona kunge iri S, ML kana XL. Muchidimbu, iwo akanaka mapantini asingazokuodza moyo uye iwe unogona kuasarudza nyore nekudzvanya pano.
Musika wemachira wakatsvagawo kushandiswa kwezvakanaka zvinhu zvinofarira kuchengetedzwa uye kuchengetedzwa kweiyo nzvimbo Uye zvese nekuda kwezvinhu zvakadai sevelcro, manapukeni anova anodhura.
Izvo zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti mwana anoshandisa anodarika 1000 manapukeni muhupenyu hwake uye kana kune ino nhamba isu tave iko iko kuwedzera kushandisa manapukeni kune zvipfuyo, huwandu hwezvinhu zvakakandwa munzvimbo dzezvisikwa hwaizowedzera zvakanyanya.
Mupfungwa iyoyo inokurudzirwa mukuwedzera kune kushandiswa kweanopora manapukeni, manapukeni anogona kushambidzwa, sezvo iwo achideredza marara zvakanyanya. Aya manapukeni ari muhukuru S, mu pink kana bhuruu uye unogona kuiwana Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa..
Mazano pakupfeka diaper
Ichokwadi che kuisa diaper pambwa yedu kunogona kuvhiringa, kanenge kashoma kekutanga. Ndicho chikonzero aya mazano angave anobatsira kwauri:
Tarisa saizi usati wazvitenga. Napukeni rakakurisa kana diki rinogona kunetsa.
Ita shuwa kuti ndicho chigadzirwa chakakodzera, se kune manapukeni evarume nevakadzi uye kunyangwe zvichienderana nerudzi.
Si haina kumira zvakanaka panzvimboFunga kutenga rudzi rwemachira anoshandiswa kunyatsokwana manapukeni.
Chinja ipapo ipapo rega chipfuwo chako chichisvibise. Mukuwedzera pakusafadza, kusiya imbwa yako mumucheka wakasviba kunogona kukonzera kutsamwa kweganda.
Muchenese kuzasi kwake uye usati wachinja manapukeni nea tauro duku rakanyorova.
Mujaire manapukeni kumusiya achinhuwa nekumupa tunonaka sezvawaipfeka.
Kupi kunotenga imbwa manapukeni
Pane a nzvimbo dzakawanda dzakasiyana kwaunogona kutenga manapukeni embwa, mungave muzvitoro zvehunyanzvi kana zvakajairika.
Chekutanga pane zvese, mu Amazon Iwe uchawana huwandu hukuru hwemanapukeni emarudzi ese, kubva pakuraswa kusvika pakugezwa, evakadzi, varume ... zvakare, kana waita chibvumirano chePrime service, uchave nawo kumba munguva pfupi.
Imwe yenzvimbo dzakajairika dzekutenga rudzi urwu rwechigadzirwa ndeye online zvitoro zvemhuka like Kiwoko or TiendaAnimal. Ivo havana chete zvigadzirwa zvemhando yepamusoro ipapo, asi ivo vanogona kukuraira kana zvichidikanwa.
Pakupedzisira, mune zvimwe veterinarians Ivo zvakare vane manapukeni nemapedhi. Kunyangwe iri imwe yenzvimbo dzinowanzo kudhura, ndipo pavanogonawo kukuraira zvirinani, sezvo vari nyanzvi.
Tinovimba takakubatsira iwe kuwana akanakisa imbwa manapukeni echipfuyo chako. Tiudze, imbwa yako yakamboitakura here? Une matinji ekuapfekedza kana kuaburitsa? Ndeupi rudzi rwenapukeni rwakakunakira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Iyo yakanakisa imbwa manapukeni kune ese mamiriro
Mabhurashi akanakisa embwa uye mashandisirwo awo
Macape embwa, anodziya zvisingaiti